4 ASTAAMOOD oo adiga oo aan dhakhtar aadin aad ku garan karto inuu liito DIFAACA JIRKAAGU (Qaybtii 3-aad) | Hadalsame Media
Home Caafimaadka 4 ASTAAMOOD oo adiga oo aan dhakhtar aadin aad ku garan karto...
4 ASTAAMOOD oo adiga oo aan dhakhtar aadin aad ku garan karto inuu liito DIFAACA JIRKAAGU (Qaybtii 3-aad)
(Hadalsame) 02 Juun 2020 – Markii la maqlo coronavirus iyo sida lagaga gaashaaman karo, waxaa markiiba soo baxda in lakala sikado, in nadaafadda lagu dadaalo iwm, balse waxaa jirta arrinta ugu asaasisan waxaa oo dhan oo ah Hannaanka Daafaca dabiiciga ah ee jirka (immune system).
Halkan ka akhri qaybtii 1-aad…
Halkan ka akhri qaybtii 2-aad…
Waayo qofkii uu daaficiisu liitaa wuxuu halis u yahay cudurrada neef-mareenka ku dhaca sida COVID-19, oo uu keeno SARS-CoV-2, iyo cudurrada kale, taasoo dhalinaysa natiijo aan la mahadin.
Haddaba aannu eegno 4 qodob oo la yaab leh oo kuu sheegaya in aanu fiicnayn daafaca jirkaagu:
4 – Daal joogto ah
Jirkaagu wuxuu aalaaba isku deyi karaa inuu wax kuu sheego marka uu dareemo inuusan waxyaabaha qaar u samayn karin sidii looga bartay.
“Haddii aad isku aragto daal tiiyoo aad waqti fiican huruddo, waxaa dhici karta inuu dhab kaa haysto dhanka daafaca jirka. Jirkeennu wuxuu kaydiyaa tamar badan si uu ugu taageero daafaca jirka, si uu ugula dagaallamo ili-ma-aragtada. Waxaa jiri kara dhowr arrimood oo aad u daallan tahay.
”Haddii aad aragto kala goys xanuun, lallabbo ama yalaalugo, xiisaha cuntada oo yaraada, waxaan ka fikiri karnaa inuusan difaacu fiicnayn. Gaar ahaan marka uu jahawareero daafaca jirku oo ay ku dhacdo jirrada autoimmune, wuxuu bilaabayaa inuu joojiyo difaaciddii jirka ee cadowga dibedda, kaddibna wuxuu bilaabayaa inuu nudayaasha jirkiisa ula dagaallamo sidi cadow,” ayuu yiri Evrenkaya.
Previous articleCAASIMADDII CAABUQA: Magaaladii uu kasoo bilowday Covid-19 oo laga waayey hal kiis oo karoona ah!!
Next articleGALKA BAARISTA: Maxaad ka ogtahay hardanka siyaasadeed ee Gobolka Gedo? (Dhegeyso)